January 2019 – MM File
သင့်အတွက် ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလက်ဆောင်က ဘာဖြစ်မလဲ ?
သင့်အတွက် ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလက်ဆောင်က ဘာဖြစ်မလဲ ? လူတိုင်းအတွက် ဘုရားက အနည်းဆုံး ဆုလက်ဆောင်တစ်ခုတော့ ပေးထားတက်ပါတယ် ကိုယ်တိုင်မမြင်နိုင်ပဲ ဖြစ်နေတက်ကြပါတယ် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
သင့် ယောက္ခမက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲ ?
သင့် ယောက္ခမက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲ ? သင်နဲ့ တွဲလို့ရမှာလား ၊ သင်နဲ့ တည့်ပါ့မလား ဘဝမှာ သင်က ယောက္ခမတစ်ယောက်တစ်လေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရအောင်တောင် စွံပါ့မလား ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို […]
သင့်ကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ စကားလုံး ၃ လုံးက ဘာများဖြစ်မလဲ ?
သင့်ကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ စကားလုံး ၃ လုံးက ဘာများဖြစ်မလဲ ? လူသားတိုင်းမှာ ကိုယ်စားပြုမှုတွေ ရှိပါတယ်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့ ဘယ်တူပါ့မလဲ ၊ သင်ကရော ? ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် […]
ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ ကြုံရမယ်ဆိုရင် သင်က ဘယ်လိုကြုံရမှာလဲ
ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ ကြုံရမယ်ဆိုရင် သင်က ဘယ်လိုကြုံရမှာလဲ လူတိုင်းဘဝမှာ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်တစ်ခုမက ကြုံဆုံနိုင်ပါတယ် အဲ့ဒီလိုကြုံရမယ်ဆို သင်က ဘယ်လိုထူးဆန်းတာမျိုးကြုံရမှာလဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
သင့် နှလုံးသားထဲမှာ တည်ရှိနေတဲ့အရာက ဘာဖြစ်မလဲ?
သင့် နှလုံးသားထဲမှာ တည်ရှိနေတဲ့အရာက ဘာဖြစ်မလဲ? ဘယ်လို အရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေမလဲ ၊ သင့်ရဲ. လေးနက်မှုက ဘာတွေဖြစ်မလဲ သင့်နှလုံးသွေးထဲ စီးဆင်းနေတာက…. ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း […]
သင့်ရဲ. ချစ်မှုရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်က ဘာဖြစ်မလဲ ?
သင့်ရဲ. ချစ်မှုရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်က ဘာဖြစ်မလဲ ? သင်က ခုမှ မူကြိုလေးလား ဆရာ့ ဆရာကြီး ဖြစ်နေပြီလား ဘယ်လိုလား ညာလိုလာား ညာလို့မရပါဘူးနော် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို […]
သင့် နဂိုဗီဇက ဘယ်လိုများလဲ ?
သင့် နဂိုဗီဇက ဘယ်လိုများလဲ ? အချစ် ၊ အမုန်း ၊ ကိုယ်ရေကိုယ်သွေး နဲ့ လိင်ဆွဲဆောင်မှု ဆန်းစစ်ချက် ရမှတ်တွေက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို […]
သင်ဟာ အတွင်းစိတ် ဘယ်လောက်ထိ ညစ်နွမ်းသူလဲ
သင်ဟာ အတွင်းစိတ် ဘယ်လောက်ထိ ညစ်နွမ်းသူလဲ တကယ်က ညစ်နွမ်းသူမဟုတ်ပဲ ဖြူစင်လွန်းသူလေးလည်း ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ ဒါမှမဟုတ် အဖြူကို အရောင်ဆိုးခံခဲ့ရတာများလား ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
သင် ဘယ်လိုဘဝမျိုးမှာ သာယာတတ်သူလဲ ?
သင် ဘယ်လိုဘဝမျိုးမှာ သာယာတတ်သူလဲ ? သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝမျိုးကို လူတိုင်းလိုချင်တက်ကြမှာပါပဲ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါပေမယ့်ပေါ့…….. ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
သင် ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်ရမှာလဲ ?
သင့် ဘဝမှာ ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်ရမှာလဲ ? အိမ်ထောင်တောင် ကျပါ့မလား တွေးပူနေရင်လည်း တွေးပူနေမှာပါ ဘာမှပူမနေပဲ ဂိမ်းလေးကို ကစားပြီး အဖြေရှာကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ […]